Mifantoha amin'ny Photoshop hamoahana zavatra amin'ny sary | Famoronana an-tserasera
Un mifantoha amin'ny Photoshop mba hampiavaka ny sary iray dia teknika ampiasain'ny mpaka sary sy mpamorona endrikas rehefa te-hanasongadina ny ampahany amin'ny sary iray izy ireo ary hanaisotra ny famirapiratana amin'ny ampahany hafa izay tsy dia manandanja loatra. Amin'ny tranga maro dia hahita sary tsara isika fa ny tsy fisian'ny halalin'ireo na singa manan-danja no very tao amin'ilay firafitra rehefa nalaina ilay sary.
Blur background mba hanasongadinana ny ampahany lehibe amin'ny sary, mamorona blur tsy mitongilana mba hampihena ny lanjan'ny maso amin'ny antsipiriany sasany na te-hahazo fotsiny sary miaraka amin'ny lalao an-tsary bebe kokoa. Teknika misy valiny tena tsara izy io ary tsy mila fahalalana lehibe momba izany Photoshop.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika hamoronana ny vokany mifantoka tebokal dia ny manana sary ahafahana mampihatra ny vokany raha vantany vao azontsika ny sary dia hosokafantsika izy io Photoshop ary hanomboka hiasa izahay.
Averinay ny sosona lehibe indroa mandra-pahazoanao sosona telo amin'ny fitambarany.
Misafidy ny sosona ao afovoany isika, ao amin'io sosona io no hametrahantsika ny blur. Soso-kevitra izany lazao ireo sosona Mba hiasa amin'ny fomba milamina kokoa, amin'ity tranga ity dia azontsika atao ny miantso ny saha eo afovoany ho "tsy mifantoka" ary ny sosona ambony "mifantoka". Ny fiasana amin'io fomba io dia tena zava-dehibe mba tsy ho very rehefa eo isika miasa miaraka amin'ny sosona maro.
Mamorona a gaussian blur ao amin'ny sosona afovoany, ny habetsahan'ny blur dia zavatra miovaova arakaraka ny filan'ny olona tsirairay. Raha mila fifanoherana mahery vaika tokoa isika eo amin'ny singa iray sy ny iray hafa, toy ny fanjavozavoana ny fiaviany, dia mampiharihary tsy mazava kokoa isika.
Aorian'ny famoronana ilay blur dia ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia mamorona sarontava sosona amin'ny sosona ambony (ambonin'ilay sosona tsy mifantoka) izay ataon'ity sarontava ity dia mamela ny sosona ambony ho tonga mangarahara amin'ny alàlan'ny famindrana borosy eo amboniny. Dia a teknika be mpampiasa amin'ny asa maro miaraka amin'ny Photoshop.
Miaraka amin'ny fanampian'ny borosy mandeha izahay fisafidianana ireo faritra tiana hofoanana, milalao ny masontsivana amin'ny borosy izahay: hamafisana, hafahafa, fikorianana. Vita izany vokatra izany satria rehefa mandoko amin'ny faritra misy borosy dia lazainay amin'ny programa fa tianay hanjary mangarahara io faritra io, avelantsika hiseho ny sosona ambany, azontsika atao ny mankasitraka ny effet blur.
Azontsika atao koa ny mampihatra a haavon'ny fanitsiana haavon'ny miaraka amin'ny tanjon'ny asongadino ny faritra misy jiro. Ny mason'olombelona dia voasarika hatrany amin'ireo faritra misy hazavàna bebe kokoa, noho izany antony izany ny fanamaizina ireo faritra izay tsy manandanja dia afaka manampy antsika hamorona famakiana sary tsara kokoa.
Miaraka amin'ny fanampian'ny Photoshop nianatra namorona a vokany be mpampiasa amin'ny sary ary amin'ny fampiasana tsy manam-petra ho an'ny karazana tetikasa sary. Ny fiasa miaraka amin'ny sarontava sy ny fanitsiana sosona dia fototra, ilaina ary misy valiny matihanina ilaina ho an'ny mpanakanto sary rehetra. Hatsarao ny sarinao ary hanjakazaka kely kokoa Photoshop misaotra ny fanampian'ity lesona ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Mifantoha amin'ny Photoshop mba hampiavaka ny sary iray
Waka dia hoy izy:
Asa be loatra, sa tsy izany?
Ao amin'ny menio fanivanana dia manana galeriana vokarin'ny blur ianao izay manome izany famaranana tsara izany miaraka amina andiam-panitsiana tanteraka.
Mamaly an'i Waka
Pablo Gondar dia hoy izy:
Ity fomba ity dia ampiasaina amin'ny fikitihana mazava tsara amin'ny fomba mazava kokoa ho an'ireo asa mila antsipiriany bebe kokoa. Toy ny hoe ny fanitsiana loko no miasa amin'ny fomba ankapobeny na amin'ny alàlan'ny fanitsiana mazava kokoa amin'ny alàlan'ny fanitsiana voafantina. Tokony ho fantatrao izay ilaintsika isaky ny tetikasa.
Valiny tamin'i Pablo Gondar